Wantoota G-3 naannoo siiqqota sadan isaatti naaneessuuf, wanticha filachuuf cuqaasi, ittaansuun qabannoowwan isaa agarsiisuuf irraa deebi'ii cuqaasi. Kallattii wanticha naannessuu barbaaddetti qabannoo harkisi.
Kuubii guutamee bakka islaayidii keessatti harkistu kaasa. Rektaangilii G-3 kaasuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Geengoo guutame bakka islaayidii keessatti harkistu kaasa. Mululleewwan kaasuuf jijjiirraa gaqqabii wayita harkistu.
Akmooyyee geengoo bakka islaayidii keessatti harkistu irratti bu'uureffate kaasa. Akmooyyee luxee irratti bu'ureffate kaasuuf, jijjiirraa gaqqabii wayita harkistu.
Muxxata geengoo bakka islaayidii keessatti harkistuu irratti hundaa'e kaasa. Muxxata luxee irratti hundaa'e kaasuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Piraamida bu'uura rooga-arfee bakka islaayidii keessatti harkiftuu kaasa. Piraamida bu'uura rektaangulaawaa kaasuuf, wayita harkistu Shift gaqqabi. Rooga-addee gara garaa bu'uura piraamidaatiif fayaadamuuf, qaaqa Galteewwan G-3 baniitii caanccala Ji'oomeetrii cuqaasi. Bal'ina Murawwanii keessatti, lakkoofsa cinaa rog-addee sanduuqa mallattoo Surdalaa galchi, ittaansuudhaan mallattoo filannoo magariisa cuqaasi.
Wanta boca amartii kan geengoo irratti hundaa'e bakka islaayidii keessatti harkistu kaasa. Luxee irratti hundaa'e kaasuuf, jijiiraa gaqqabi wayita harkistu.
Wantoota boca-golboo kan geengoo bakka islaayidii keessatti harkistuu irratti hundaa'e kaasa. Qola luxee irratti hundaa'e kaasuuf, jijjirraa gaqqabi wayita cuqaastu
Walakaa tokkoo geengoo bakka islaayidii keessatti harkistuu kaasa. Sheepirooyidii tokkoo fi walakkaa kaasuuf, jijjiirraa gaqqabi wayita harkistu.
Title is: Wantoota G-3